UNHCR oo sheegtay inay Soomaaliya marti galisay qaxooti badan sanadki 2020 - Caasimada Online
Home Warar UNHCR oo sheegtay inay Soomaaliya marti galisay qaxooti badan sanadki 2020
UNHCR oo sheegtay inay Soomaaliya marti galisay qaxooti badan sanadki 2020
Muqdisho (Caasimadda Online) – Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan Qaxootiga ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka mid aheyd dalalka Afrika ee sanadkii lasoo dhaafay martigaliyay Qaxootiga faraha badan.
War kasoo baxay hay’adda ayaa lagu sheegay in Qaxootigaasi ay kala socdeen Afrika iyo Aasiya ayna dalalka ay ka yimaadeen ka jireen dhibaatooyin dhanka Amniga.
In ka badan 24,000 qof oo ajnabi ah ayaa sanadkii 2020 soomaaliya nabad galyo u raadsaday sida ay sheegtay heyada UNHCR .
Dadkaas waxay badankood ka yimaadeen wadamada Ethiopia, Syria Iyo Yemen sida lagu sheegay warbixinta kasoo baxday hey’adaan.
Gobalada waqooyi galbeed, Bari iyo gobalka Banaadir ayaa ah meelaha ugu badan oo ay qaxootiga joogaan
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in lixdii sano ee la soo dhaafay ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya in ku dhow boqol kun oo qaxooti ah kuwaasi oo hore ugaga cararay dagaalada sokeeye ee dalka Soomaaliya.